Nikela ngemoto- BullyingCanada
ufuna inkxaso yakho Xhasa Umsebenzi Wethu Obalulekileyo Isisa Sakho Sisindisa Ubomi Yibayinxalenye Unako Ukunceda BullyingCanada uthembele kwisisa
Sixhase. Gcina Ubomi.
Inkxaso yethu ebalulekileyo yenziwe ngabanikeli njengawe.
ukhalela uncedo ngo-2020 ngefowuni kunye nesicatshulwa
ukhalela uncedo ngo-2020 ngencoko ephilayo kunye ne-imeyile
iindwendwe ukuya BullyingCanada.ca ngo-2020
Ungajika isithuthi sakho esingafunekiyo sibe ngumnikelo wesisa ukuxhasa ubundlavini baseCanada! Ukusebenza egameni lethu, Nikela ngeMoto yaseCanada iya kwamkela isithuthi sakho ukuba sinikelwe - siqhuba, okanye hayi. Indala okanye intsha!
Akukho ndleko kuwe, kwaye inkqubo ilula kakhulu! Nikela ngemoto yaseCanada iya kuququzelela yonke imiba yomnikelo wemoto yakho ukusuka ekuthatheni ukuya kwintengiso yokugqibela, iqinisekisa ukuba isithuthi sakho siya kuthengiswa ngesona siphumo siphezulu sentengiso. Baye bagqithisele imali kuthi eBullying Canada, kwaye sikuthumelela irisithi yerhafu ngexabiso lemoto. Yahlukana nale moto ingafunwayo namhlanje!
Ezinye iindlela zokuxhasa BullyingCanada
Ukongeza kwi-intanethi, kukho iindlela ezimbalwa zokuxhasa umsebenzi wethu osindisa ubomi.
Enkosi kubaxhasi bethu abaxabisekileyo, abanesisa!
Ukusixhasa ngokunyusa imali kunokuba lula kwaye kumnandi!
Intsebenziswano yenkampani inokuxhamla zombini BullyingCanada kunye neshishini lakho!
Izipho ezikhulu ziyaxhobisa BullyingCanada ukwenza ngakumbi!
Izithuthi ezingafunwayo zijika zibe yinkxaso yesisa!
Shiya ilifa elikhumbulekayo kwaye uxhase ulutsha kwizizukulwana ezizayo!